मझेरीमा लेख रचना प्रकाशन गर्दा.. | मझेरी डट कम
kbs — Wed, 07/01/2009 - 19:56
श्रद्धेय पाठकवृन्द, लेखकवृन्द
पाठक लेखकहरूको सक्रियता सहभागिता तथा नियमपालनले नै मझेरीलाई स्वस्थ तथा साझा स्थल बनाउन सकिने कुरामा द्विविधा छैन। त्यसकारण मझेरीमा लेख-रचनाहरू प्रकाशन गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला।
पूर्णत‌: साहित्यिक रचनाहरू मात्र प्रकाशन गर्नुहोला। राजनैतिक लेख-रचना, सामान्य ज्ञान, नेपाली साहित्यसँग असम्बन्धित रिपोर्ट समाचारहरू नछाप्नुहोला।
अन्य पाठक तथा लेखकहरूलाई आँच आउन सक्ने किसिमका लेखहरू र प्रतिकृयाहरू प्रकाशन नगर्नुहोला।
रचनाहरू मझेरीमा राख्नु अघि भाषिक सुद्धता, ह्रस्वदीर्घ, आदिलाई पुन: एक पटक नियालेपछि मात्र प्रकाशन गर्नुहोला। लेख लेखिसकेपछि व्यक्त गर्न खोजेको भाव प्रष्फुटन भएको छ कि छैन, पून: एक पटक जाँच गरेर, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेपछि मात्र प्रकाशन गर्नुहोला।
रचनाहरू युनिकोडमा मात्र राख्नुहोला। कान्तिपुर, प्रीति आदि फन्टमा लेखिएका लेखहरू मझेरीमा पढ्न मिल्दैन। नेपाली लेख्नको लागि मझेरीको वायाँ भागमा राखिएको "नेपाली टाइपिङ् (एक्स् नेपाली)" लिंकमा लेख्न सक्नुहुनेछ। अथवा,
युनिकोडमा लेख्न यहाँ जानुहोस्।
कान्तिपुर, प्रीति फन्टबाट युनिकोडमा परिणत गर्न यहाँ जानुहोस्।
नेपाली शब्दकोषमा शुद्धाशुद्धी हेर्न यहाँ जानुहोस्।
लेखेको विधाको नियम अनुसार आफ्नो लेख लेखिएको छ कि छैन राम्ररी चेक गर्नुहोला। विशेष गरी गजल, छन्द कविता, हाइकु लेख्ता नियम पालन भएको नभएको राम्ररी हेर्नुहोला।
प्रतिकृया लेख्ता सकेसम्म अतिथि नभई आफ्नै नाममा लगइन गरेर मात्र प्रतिकृया दिनुहोला।
अरू लेखकको रचना आफ्नो नाममा पोस्ट नगर्नुहोला। यदि यसो गरेको फेला परेमा, सम्बन्धित लेखकलाई मझेरीमा प्रतिवन्ध गर्न वाध्य हुनेछौं।
मझेरीको "नीति" अनुसार एकै लेखकको धेरै लेखहरू तथा एकै बिधाका धेरै लेखहरू लगातार रूपमा एकै पटकमा मझेरीको गृहपृष्ठमा राखिने छैन। यस्ता केही लेखहरूलाई आवश्यकता अनुसार मझेरी सञ्चालकले गृहपृष्ठबाट हटाउन सक्नेछ। गृहपृष्ठबाट हटे पनि मझेरीको भण्डारमा अँझै रहने छ। उक्त रचना हेर्न, लेखकसूची, विधासूचीबाट क्लिक गर्दै खोज्नुहोस्।
मझेरीमा लेख रचना प्रकाशन गर्न सहयोग चाहिएमा अथवा केही सुझाव भएमा इमेल पठाउनुहोस््: [email protected]
साक्षरता शिक्षाका आधारभूत पक्षहरू
रातभर चन्द्रमा खसिरह्यो...
तिमी अर्थात् मेरी मुटु
'धूपीको गीत' भित्रका धुनहरू
किन तिमी टाढा हुन्छौ ?
विद्यार्थी शरणम् गच्छामि !
पाप आउँछ घाँटी रेट्न सत्य टाढा जाँदा
ग्राम्स्कीको देश इटलीमा
त्यो १२ गतेको दिन